तीन रिसोर्ट्स, Grindelwald, Wengen, र Murren, को Jungfrau क्षेत्रीय लिफ्ट पास गरेर ढाकेका छन्. यो जाडो हो अनुभव सपना!
तपाईं स्किइङ मा अनुभव छ भने, त्यसपछि ट्रेनबाट यात्रा गर्नका लागि सर्वश्रेष्ठ स्की रिसोर्टहरू हुनेछ Sauze d'Oulx क्षेत्र. जब हिउँ पतन पेड बीच पाउडर क्षेत्रहरू साँच्चै आफ्नै आउन. गाउँमा माहौल रमाइलो र स्वागत र छ आकर्षण पुरानो cobbled सडकमा को साँच्चै भन्छन् एक सुन्दर स्पर्श यस साहसिक गर्न.
प्रस्थान लन्डन St Pancras on 9:24 पेरिस नर्डमा युरोस्टार हुँ, ट्याक्सीबाट स्टेशन परिवर्तन गर्नुहोस्, र लिनुहोस् 2:41 बजे बाट पेरिस-लियोन TGV Oulx गर्न, मा आइपुगेको 7:23 बजे. त्यहाँ देखि यो छ 15 बस वा ट्याक्सी द्वारा मिनेट.
तपाईं पहिले नै आफ्नो झोला पैक? राम्रो! किनभने छ यात्रा को मुश्किल भाग बाहिर क्रमबद्ध. तपाईंको रेल बुकिंग मात्र मिनेट लाग्नेछ, व्यवस्थापक शुल्क बिना! कस्तो खुशी! यात्रा एक ट्रेन सेव अब र जीवन भरको छुट्टी बुक गर्नुहोस्.